Zimbabwe v Morocco - Rugby Africa Gold Cup [Getty Images]
HARARE, ZIMBABWE - JUNE 16: In this handout image provided by the APO Group, Brendan Mandivenga of Zimbawe b ]reaks through a weak defense line during the Rugby World Cup qualification and Rugby Africa Gold Cup match between Zimbabwe v Morocco at Police Grounds on June 16, 2018 in Harare, Zimbabwe. (Photo by APO Group via Getty Images)
HARARE, ZIMBABWE - JUNE 16: In this handout image provided by the APO Group, Lock Kudakwashe Nyakufaringwa of Zimbabwe breaks through a tackle during the Rugby World Cup qualification and Rugby Africa Gold Cup match between Zimbabwe v Morocco at Police Grounds on June 16, 2018 in Harare, Zimbabwe. (Photo by APO Group via Getty Images)
HARARE, ZIMBABWE - JUNE 16: In this handout image provided by the APO Group, scrumhalf Hilton Mudariki of Zimbabwe makes a quick pass off a ruck during the Rugby World Cup qualification and Rugby Africa Gold Cup match between Zimbabwe v Morocco at Police Grounds on June 16, 2018 in Harare, Zimbabwe. (Photo by APO Group via Getty Images)
HARARE, ZIMBABWE - JUNE 16: In this handout image provided by the APO Group, Morocco lose a line-out to their Zimbabwean hosts during the Rugby World Cup qualification and Rugby Africa Gold Cup match between Zimbabwe v Morocco at Police Grounds on June 16, 2018 in Harare, Zimbabwe. (Photo by APO Group via Getty Images)
HARARE, ZIMBABWE - JUNE 16: In this handout image provided by the APO Group, Morocco's dash for the try line is held up by Zimbabwe during the Rugby World Cup qualification and Rugby Africa Gold Cup match between Zimbabwe v Morocco at Police Grounds on June 16, 2018 in Harare, Zimbabwe. (Photo by APO Group via Getty Images)